Maxaa dhacaya marka ay dadku isweydiinayaan mowqifka guud
Maamulayaasha dhulka ee Waaxda Khayraadka Dabiiciga ah (DNR) waxay haystaan caqabad: abuurista hoyga ugu fiican ee shimbir ama qaxwada, iyada oo aan loo baahnayn qalab, herbicides, iyo jawiga caadiga ah. Waxyaabaha dhoofiya lo'da ee Wisconsin ayaa la kulmi doona dhibaatooyin kala duwan: helitaanka kooban ee dhulka ayaa wax u dhimaya ganacsigooda.
Winrock International wuxuu xusay in labadan dhibaato ay xal u heleen. Waxaa soo dhoweeyay magaciisa Winthrop Rockefeller, Winrock waxay ku hawlan tahay khibradaha cilmi-baarista iyo farsamada iyadoo la adeegsanayo ganacsi cusub si ay u gaarsiiso xalliyado ku salaysan suuqa oo hagaajiya nolosha adduunka.
Khabiirada joogtada ah ee Wallace Centre ee Winrock International ee Mashruuca Daaqa ah ayaa keenaya labada maamulayaasha dhulka iyo raaxeeyaha labadaba mashruuc tijaabo ah saddex goobood oo ku lug leh 200 hektar oo ku yaala La Crosse iyo Vernon Counties. Mashruucyada ayaa waxay muujinayaan in daaqa wareega ah uu keeni karo natiijooyin dhaqaale oo qiimo leh: Maamulayaasha dhulalka dadku waxay badbaadin karaan lacagta iyada oo loo oggolaanayo xayawaannada aan loo baahnayn in ay xakameeyaan cagaarshoowga, iyada oo mishiinnadu ay balaarin karaan ganacsigooda.
Sida muhiim u ah, daaqa wuxuu leeyahay faa'iidooyin deegaaneed, labadaba sii wanaajiya deegaanka duurjoogta ah iyo abuurista dhiirigelin dhaqaale oo xooggan oo loo adeegsado xaglo-qabad si loo barto sida loo maareeyo xoolahooda ilaalinta.
"Kuwo badan, oo ay ku jiraan aniga, hore ayay u barteen xirfadaheena sida ilaaliyayaasha ah in lo'du burburiyaan, gaar ahaan bangiyada daadka. Waxa aan ku aragno guryaha DNR waa in ka soo horjeeda ay noqon karto run. Waxay noqon karaan kuwa wax dhisaya oo aan caadi ahayn. Saameynta lo'da guud ahaan waxay ku xiran tahay sida loo maareeyo, "ayuu yiri mashruuca Daaqa ah ee Allison Van.
Waqooyiga Kuuriya Waqooyiga Waqooyiga Waqooyiga Aasiya George Weeks ayaa sheegay in daaqsinka xajinta uu xallin karo miisaaniyadda iyo caqabadaha abuurka labadaba. "Maamulidda daaqa wareega ah waxay noqon kartaa qalab maaraynta khudaarta oo wanaagsan, gaar ahaan marka dhaqaale loogu talagalay daaweynaha kale waa yar yahay," ayaa lagu yiri todobaad.
Duulimaadyada daaqa ayaa dareenka ka qaaday DNR. Maalmaha munaasabadaha iyo bandhigyada kooxda Mashruuca Daaqa ah ee sayniska ee sayniska ka dambeeya daaqa wareega ayaa xoojiyay maamulayaasha kalsoonida DNR ee ku jira ficilka. Mashruuca Daaqa ayaa hadda taageeraya WI DNR si loo helo goobo dheeraad ah oo ku habboon daaqa iyo u soo bandhigida mashaakilaadka kale ee maskaxda ilaaliya.